सुजिताको श’व भेटीएको जंगलमा रिपोर्टिङ गर्न पुगेका युट्युबर भोजराज थापालाई स्थानीयहरुले लखेटे पछि ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 6, 2021 AdminLeaveaComment on सुजिताको श’व भेटीएको जंगलमा रिपोर्टिङ गर्न पुगेका युट्युबर भोजराज थापालाई स्थानीयहरुले लखेटे पछि ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
सुरुमा जंगलमा च्याउ खोज्न आउने चेपाङहरुले सुजिताको श’व फेला पारेपछि इलाका प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराएका थिए । सुजिताको परिवारले श’वको पहिचान गरिसकेको उनले बताएका छन । सुजिताको श.व जंगलको बीचमा रहेको खोल्साको लहरामा अल्झिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । श’वको अवस्था हेर्दा उनको मृ’त्यु दुई-तिन दिन अगाडी नै भएको हुन सक्ने उनले बताए ।
यसै घ’टनाको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न चितवनको जंगल पुगेका भोजराज थापा र स्थानीय बीच केहि भनाभ.न भएको छ । मृ’तककी आमालाई अन्तर्वार्तामा बोल्न सिकाएको र रु’न लगाएको भन्दै स्थानीयहरुले भोजराजलाई जंगलमै र्याकर्याक्ति पारेका थिए । घटना बारे भिडियो यहाबाट हेर्नुहोस:
यस विषयमा भोजराज थापाले पनि स्पष्टिकरण दिएका छन । सामाजिक संजालमा विवाद आएपछि उनले मृतक सुजिताको आमा समेतलाई यसबारे स्पष्ट पार्न लगाएका छन । जहा मृतक सुजिताकाकी आमाले भोजराजलाई लगाइएको आरोप झुटो हो समेत भनेर स्पष्ट पारेकी छन । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस्: